Ma laguugu dhibaa xuduudaha ama garoonada dayaaradaha ee USA? Ma laguugu yiraahdaa waxaad ku jirtaa liisaska sida “No fly” ama “watch list”?
Anigoo halkaygii ka sii wadaya in aan u soo gudbiyo macluumaadkii aan u soo gudbin jirey bulshadayda Soomaaliyeed ayaa maanta waxaan go’aan saday in aan soo gudbiyo warbixin aan isleeyahay kuwaan ogaynna ha ogaadaan kuwa ogna kuwa kale ha u sii gudbiyeen. Xogtan oo ku saabsan waxa uu samayn karo qofka lagu dhibo goobaha laga soo galo USA.
Dad badan oo soo gelaya dalka marayka ama ka baxaya waxaa ay la kulmaan daahitaan badan ama xarig waqti gaaban ama sharaf dhac badan. Waxaa samaysmay kelmado ay ka mid yihiin DHS TRIP, misidentified, no fly list, watch list. Dad badan oo jinsiyad walba leh oo weliba leh rag iyo dumar ama caruur saqiir ah iyo waayeelba waa ay saamaysay. Haddaba qofkii ay la soo deristo dhibaatadan oo kale Department of Homeland Security oo ogsoon dhibtan waxaa ay diyaarisay hab dadka dhibtaan ku dhacdo ay magacooda ku nadiifiyaan oo uga baxaan takoorka.
Nasiib darro habkan waxaa uu noqday mid ay ka faa’iideystaan dadka isticmaala internetka oo keliya. Inkastoo uu socdo dadaal dhinaca congresska oo la doonayo in airporada laga furo goob la isku magac nadiifiyo loona yaqaan - one stop shop-haddana ma suurtoobin.
Haddaba haddii aad dhibtaan la kulanto haddii aad doonayso booqo webka hoose
ka dibna guji
Step 2 - how to use DHS TRIP
Ka dibna ku dhufo
Hadii aad aqriso shabakadahan waxaa kale oo suurto gal ah in aad ogaato macluumaad kale oo la xiriira arrintan.
Maxmuud Nuur Wadheere